Cadho The Perfect Ilaah — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Rebecca Abbey Iiams • August 19, 2013 at 9:09 waxaan ahay • Reply
Rabbiga ka cabsashadiisu waa bilowga aqoonta, Laakiinse nacasyadu waxay quudhsadaan xigmadda iyo edbinta. Prov. 1:7 — Thanks wax badan u dhiirigelinta.
K.C. McElroy • August 19, 2013 at 9:09 waxaan ahay • Reply
walaalkiis waxbaridda Great. Ka dhig sii kordhaya ee Masiix sida aad u caawin dadka kale u koraan. Ilaah ha barakeeyo.
Derek Lane • August 19, 2013 at 9:10 waxaan ahay • Reply
fariin Wonderful. Sii wad in aad ha isaga oo aad u isticmaali!
martida • August 19, 2013 at 9:10 waxaan ahay • Reply
Haddii ilaahyo cadho ayaa loo qaaday naga fogee iyada oo dhiigga Masiix, ayaa weli oo aannu u malaynay inay ka cabsadaan ilaah (Maahmaahyadii 1:7) iyo haddii ay sidaa tahay waxa aannu u malaynay inay ka cabsadaan isaga ku saabsan?
Jeremydaniel95 • August 19, 2013 at 9:10 waxaan ahay • Reply
sida ii caqliga leh
Yanks7375 • August 19, 2013 at 9:11 waxaan ahay • Reply
fariin aad iyo aad u wanaagsan waxaan oo dhan waxay leeyihiin dhibaato la ii ay mar walba dagaal la mid ah